अहिले सम्म मेरो मन कसैसँग सरेको छैन् – गायिका संग्रौला – Dhadingnews.com – धादिङ जिल्लाको पहिलो डिजिटल पत्रिका
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०७२, शनिबार ०७:२४
धरान ४ मा जन्मेर पाँच बर्ष देखी सांगीतीक यात्रामा लागेकी गायिका सिमा संग्रौलालाई कतारका दर्शकहरुले रुचाए । उनको पहिलो एल्बम ‘नोट’ ले राम्रै बजार लिएको थियो भने उनले गाएका ‘लुकाउन सक्दीन’ , ‘के नै रुनु छ ’, ‘ दियो जल्दै छ साँझमा ’, ‘तिमी मेरो चन्द्रमा जुनेली रातको ’, ‘तस्विर हेरेर मध्यरातमा ’ बोलका गितले राम्रै चिनायो । उनलाई फरक प्रवृती र फरक शैलीकी गायिका भनेर पनी चिनिन्छ । उनको भर्खर ‘यु वान’ डान्स नामक म्युजिक भिडियो बजारमा आएको छ । तीन बर्ष ईजरायल बसेर र्फकेपछी सांगीतीक यात्राको तय गरेकी उनै संग्रौलासँग गरेको कुराकानी :
तपाईको सांगीतीक यात्रा कसरी शुरु भयो ?
– सानै देखी गायन क्षेत्रमा रुची थियो । गीत गाउने गर्थे । संगीतको क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको थियो । म पेशागत ढङ्गले नै यस क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने योजना चाहीँ थिए । तथापी बि.स. २०६७ मा एल्बम निकाले । दर्शक तथा श्रोताहरुको राम्रै प्रतिक्रिया पाएपछी यस क्षेत्रको यात्रा शुरु भएको अनुभुती मिल्यो । पेशागत रुपमा नै अब यस क्षेत्रमा लाग्नेछु ।
– गीत गाउनु मात्रै ठुलो कुरा हैन । संगितमा डुबेर गीत गाउनुपर्छ । संगितलाई राम्रोसँग बुझेर अगाडी बढ्न सकियो भने गायन क्षेत्रले अवस्थ्य खुसी दिन्छ । यस क्षेत्रबाट म एकदम नै खुसी छु । खुसी मिलेको छ । म प्रायः सबै खाले गीत गाउने गर्छु । सबै खाले गीत मन पर्छ । धरानमा जन्मेको भएकाले होला विशेष गरी पप गीत गाउन अत्याधिक रुचाउछु । धेरै जनाले पप गायिका नै भनेर पनी चिन्नुहुन्छ ।
तिन बर्ष बिदेश बसेर फर्के पछी सांगीतीक क्षेत्रमा लाग्नुभयो । किन ? त्यो भन्दा पहिले के गर्नुहुन्थ्यो ?
– जिन्दगीमा हरेक कुराको अनुभव लिन जरुरी हुन्छ । त्यही नयाँ अनुभवका लागी म ईजराईल गएकी हुँ । त्यहाँ मेरो ३ बर्ष बित्यो । मैले त्यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाए । जिन्दगीको खाली पानामा केही रंगिन दृश्यहरु कोर्ने अवसर मिल्यो । कामको अनुभव गर्ने आवसर मिल्यो । त्यो भन्दा पहिले म कलेज पढ्दै थिए । संगित प्रती रुची पहिले बाट नै थियो तर यसै क्षेत्रमा यसरी लाग्छु जस्तो लागेको थिएन । ईजराईमा हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । त्यसपछी नेपाल र्फकेर यस क्षेत्रमा केही राम्रो गर्ने सोच बन्यो । अन्य त्यस्तो कारण चाहीँ केही छैन । ईजराईल जानु भन्दा पहिले अध्ययनरत थिए ।
तपाईलाई अलि फरक किसिमकी गायिका भनेर चिनिन्छ । खुसी हुनुहुन्छ ?
– फरक शैलीकी गायिका भन्नुहुन्छ । अरु भन्दा फरक छ भन्नु स्वभाविक नै हो । सबै मानिस एकैनासका हुनै सक्दैनन् । राम्रै लाग्छ । राम्रो दृष्टिकोणले फरक छ भन्नुहुन्छ भने खुसी नहुने कुरै भएननी ।
तपाईको पहिलो एल्बम ‘नोट’ ले राम्रै माया पायो । आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा तपाईको योजना के छ ?
– भाग्यमानी ठान्छु मेरो पहिलो ‘नोट’ ले दर्शक तथा श्रोताहरुको राम्रै साथ पाएको छ । मेरो मेहनतको कदर भएको महशुस गरेकी छु । आगामी दिनमा अझै राम्रो संगित पस्किने जमर्को गर्ने छु । संगितमा केही राम्रो गरौ भनेर लागगिरहेकी छु । यस क्षेत्रमा निरन्तरता जरुरी छ । भोलीका दिनमा यसै क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्ने सोच छ ।
तपाईको यात्रालाई तारिफ गर्ने र गाली गर्नेहरुका लागी के भन्नुहुन्छ ?
– हरेक यात्रा तय गर्नु भन्दा पहिले त्यसका सहजता र जटिलतालाई राम्रोसँग केलाउन जरुरी हुन्छ । यात्राका क्रममा तारिफ गर्नेहरुलाई भन्दा गाली गर्नेहरुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । तारिफले काम गर्ने हौसला मिल्छ भने गालीले सहि मार्ग हिड्ने बाटो तय गर्छ । त्यसैले जिवनमा ताली र गालीको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
गायन क्षेत्र बाहेक अरु केही सोच्नुभएको छ ? यहाँसम्म आउने प्रेरणा कसरी मिल्यो ?
– अहिले सम्म यस क्षेत्र बाहेक अन्य सोचेको छैन । बिस्तारै सोच्नुपर्ला । यस क्षेत्रमा लागेर यहाँसम्म आईपुग्नका लागी बुबाको धेरै सहयोग मिलेको छ । मेरो प्रेरणको स्रोत उहाँ नै हो ।
नेपाली नयाँ बर्ष धमाकाका लागी कतार हुनुहुन्छ । कार्यक्रम कस्तो भयो ?
– नयाँ बर्ष २०७२ सालको अवसरमा कतारमा आयोजना भएको नवबर्ष धमाका कार्यक्रमका लागी हामी नेपालबाट डेड दर्जन कलाकारहरु आएका हौ । साच्चै कतारमा धमाका नै भयो । कार्यक्रममा दर्शकहरुको उपस्थिती अनी कलाकारहरुको प्रस्तुती निकै नै थियो । कार्यक्रम सफल भयो । सोचे भन्दा धेरै राम्रो भयो ।
प्रवासका दर्शकहरुले तपाईलाई मन पराए । कार्यक्रम भव्य रुपमा सफल भयो । कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ ?
– विदेशमा आएर प्रवासी नेपालीहरुसँग नयाँ बर्ष मनाउने अवसर जुट्यो खुसी नै छु । कार्यक्रममा प्रस्तुती गरिरहदा नेपालमा नै भएको महशुस गर्न सकिन्थ्यो । यहाँ कार्यरत नेपालीहरु साच्चीकै नेपाली कला र कलाकारहरुलाई औधी माया गर्नुहुदो रहेछ । त्यो उहाँहरुको उपस्थितीले जनाउछ । दिन धल्दै थियो दर्शकहरुको उपस्थिती पनी बाक्लिदै थियो । उपस्थित दर्शकहरु एक छिन नबसी मनोरन्जन लिनु भयो असाध्यै रमाईलो लाग्यो । यती धेरै साथ पाए यो साथ सधै भरी यसरी नै कायम रहने छ भन्ने अपेक्षा पनी गरेकी छु ।
गीतमा जस्तै कतारमा एक्लो रातमा सुस्तरी त्यो मन कसैसँग सरेकै हो त ?
– त्यस्तो अहिले सम्म सरिसकेको छैन । गीत गाउने बेलामा त्यो महशुस हुनु अती आवश्यक छ । त्यहाँको वातावरण र मैले गाएको गित उस्तै उस्तै थियो । साझँमा आयोजना भएको कार्यक्रम हो । मैले गाएका यि दुई गीतले बस्तुस्थितीसँग मेल खान्थे । मेरो मन पक्कै पनि दर्शकहरु तिर सरेको हो । त्यो रातमा म एक्ले स्टेजमा थिए तर हजारौ दर्शकहरु मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको मायाले मेरो मन सुस्तरी त्यतै तिर सरेको भने पक्कै हो । हातमा माईक परेपछी मैले पनी दर्शकहरुलाई माया दर्शाउनै पर्ने हुन्छ । गितमा केही बास्तविकता पनी हुन्छ तर मेरो मन दर्शकहरु बाहेक अरुसँग भने पक्कै सरेको छैन ।
स्वरसँगै तपाईलाई मन पराउने धेरै होलान । कतारमा तपाईले मन पराउने कोही भेट्नु भएन ?
– मन पराउने हजार हुन्छन तर अहिले सम्म मन पराउँछु भनेर भन्ने आट कसैले गरेनन् । दर्शकहरुले मन पराईदिनु भयो तर अन्यले मन पराए वा पराएनन पत्तै भएन । कार्यक्रममा व्यस्थ भईयो । कार्यक्रम सकिए लगत्तै नेपाल र्फकने तर्खर । मैले पनी खासै मन पराउने मान्छे चाँही भेटिन् ।
महिला कलाकारहरु कार्यक्रमका लागी विदेश सम्म पुग्दा कत्तिको असहज महशुस गर्नुहुन्छ ?
– भाग्यवस अहिले सम्म मलाई त्यस्तो असहज भएको छैन । कहीँ कतै सुन्ने गरिन्थ्यो तर आफुलाई नपरेपछी त्यसको बारेमा त्यती जानकारी नहुने रहेछ । सबैको सहकार्य र सहयोगले अहिले सम्म त्यस्तो असहज महशुस गर्नु परेको छैन । आफु पनी सबै कुरामा सचेत हुन जरुरी छ । महिलाहरुले पनी धेरै गरेका छन र गर्न सक्छन । महिलालाई त्यत्ती कमजोर पनी ठान्नुहुदैन ।
विदेशको कार्यक्रममा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो ?
– विदेशको कार्यक्रमका लागी कतार मेरो पहिलो भ्रमण हो । साच्चै सबैले धेरै राम्रो व्यवहार गर्नुभयो अत्यन्तै राम्रो अनुभव मिल्यो । कतारमा धेरै नेपालीहरु हुनुहुदो रहेछ । नेपालीपन जहाँ गएपनी त्यस्तै सहयोगी र मायालु हुने रहेछ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा पनी त्यो कुरा पाएँ । अत्यन्तै नौलो अनुभव बटुलेर नेपाल र्फकदैछु ।
अविवाहित महिला कलाकारहरुलाई यस क्षेत्रमा जम्म साह्रै गाह्रो हुन्छ भन्छन , अरुका गिद्धे नजरबाट जोगिनु भएको छ त ?
– सबै कलाकारहरु एकै नास हुदैनन् । केही नियतीले पनी त्यस अवस्थामा फस्न सक्छन । तर आफुलाई कसैले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छ भने त्यसको विरुद्धमा खडा हुने क्षमता राख्नुपर्छ । आज सम्म कसैले हिम्मत गरेको छैन । भोलीका दिनमा पनी त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट जोगिने छु । त्यस्को विरुद्धमा खडा रहने आट राख्नेछु । आफु बिना पनी भर पर्ने कुरा हो । हामी कलाकारहरु आफ्नो स्थानमा बस्न जरुरी छ । हल्का भईयो भने जसले पनी हेप्न सक्छ । हामी हेपिनु हुदैन । आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आफै त्यस क्षेत्रमा सवल हुन जरुरी छ ।
जिवन साथी बारे के सोच्दै हुनुहुन्छ ? कसैको माया जालमा पर्नु भएको त छैन ? माया प्रेमबारे तपाईको धारण र अनुभव बताईदिनुस न ?
– जिवन साथी रोज्ने कुरालाई हतार गर्नुहुदैन । अहिले सम्म सोचेको छैन । समय आउनुपर्छ । समय आएपछी तपाईहरुलाई अवस्य भन्नेछु । आफुसँग मिल्ने खालको मान्छे आउनु पर्छ । त्यो सबै सोचेको जस्तो सजिलो छैन । मायाजालमा अझसम्म कसैले फसाउन सकेको छैन । माया प्रेम भनेको सृष्टिको नियम हो । हरेक मानिसमा हुने प्राकृतिक बरदान हो । प्रेम आफैमा नराम्रो चिज हैन । माया र प्रेममा नै त संसार अडिएको छ । घर परिवारको माया , दर्शक श्रोताहरुको मायाको राम्रै अनुभव छ ।
कतार कस्तो लाग्यो ? विदेशका कार्यक्रमहरुमा कत्तिको अफर आउने गर्छ ?
– म रोजगारीको शिलशिलामा ईजराईल गएको हो । कार्यक्रमका लागी पहिलो पटक कतार आएकी हुँ । कतार खाडी मुलुक भएपनी एक धनी राष्ट्र हो । यहाँका महलहरु देख्दा यसलाई खाडी जस्तो देखिदैन । यहाँको विकासले तिव्र गती लिदै रहेछ । नेपालीहरुको श्रम र पसिनाले बन्दै गरेको कतारको माया पनी लाग्दो रहेछ । यहाँ एकदम रमाईलो रहेछ । विदेशमा हुने कार्यक्रममा बोलाईरहनुहुन्छ । केही समय अस्वस्थताका कारण बोलाएको देशमा पुग्न सकिन । अव छिट्टै नै सांगीतीक कार्यक्रमका लागी कुबेत जादैछु । त्यसपछी जापान र कोरिया जान्छु होला ।
कतारमा कार्यरत संगितप्रेमी दर्शहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
– कतारका संगीतप्रेमी दर्शकहरु प्रती अत्यन्तै आभारी छु । कामको शिलशिलामा विदेशमा रहेर पनी नेपाली कला र सँस्कृतिको त्यतीकै माया गर्नुहुदो रहेछ । आफ्नो कामसँगसँगै संगितलाई पनी समय निकाल्नु भएको छ । यसरी नै जो जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेपनी नेपाललाई माया गरिदिनुहोला । नेपाली कला र सँस्कृतीको जर्गेना गरिदिनुहोला । नेपाली कलाकारहरुलाई माया गरिदिनुहोला अनी सम्झिदिनु होला भन्न चाहान्छु ।
– मैले यहाँहरु माझ भर्खर यु वान डान्स भन्ने भिडियो बजारमा लिएर आएकी छु । यहाँहरुको मायाको अपेक्षा गर्दै मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा हृदय देखिनै धन्यवाद दिन चाहान्छु ।
-ईमेज नेपाल न्यूज
३० जेष्ठ २०७२, शनिबार ०७:२४ मा प्रकाशित